Madaxwayne Farmaajo ayaa saxiixay miisaaniydda dowladda – Radio Daljir
Madaxwayne Farmaajo ayaa saxiixay miisaaniydda dowladda
Janaayo 1, 2019 6:50 b 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa saxiixay miisaaniyadda Dowladda ee sanadka 2019, kaddib markii ay ansixiyeen Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
War saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Villa Somalia ayuu Madaxwenaha ku bogaadiyey Xildhibaannada Golaha Shacabka sida xilkasnimada leh ee ay u guteen waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aaddanaa qiimeynta iyo gorfeynta miisaaniyadda sannadlaha ah ee Dowladda oo ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh.
Madaxweyne Farmaajo oo dul-istaagay kororka miisaaniyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa faray Xukuumadda in ay xoogga saarto dardargelinta adeegyada bulshada, kobcinta fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed.
“Kobaca dakhliga dalka waxa uu markhaati ka yahay miro-dhalka qorsheyaasha ku qotoma ladagaallanka musuqmaasuqa, sidaas darteed waa in isbeddel muuqda aan ka sameyno dhinacyada adeegga bulshada, amniga iyo hirgelinta kaabeyaasha dhaqaalaha, si dadkeennu ay u helaan nolol wanaagsan.”
Dowladda Turkiga oo ergay cusub u magacowday wada hadalsiinta Somaliland iyo dowladda faderaalka